बर्दियामा बाघ : संख्या बढ्यो, असुरक्षा पनि बढ्यो – Action Media
१६ चैत २०७७ बिहान ५ बजे घर नजिकैको खेतमा पानी लगाउन गएका बर्दिया गेरूवा नगरपालिका १ जनकनगरका ३५ वर्षीय चुलाराम थारू पाटे बाघको आक्रमणमा परे । थारूको टाउको, कान र ढाडमा गहिरो चोट लागेको छ ।
घाइते थारूलाई आफन्तले एम्बुलेन्समा हालेर तत्कालै नेपालगञ्ज पुर्‍याएका थिए । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जको आईसीयू वार्डमा उपचाररत थारूले घटना विवरण सुनाउँदै भने- चैत महिना धान रोप्ने सिजन छ । खेतमा सिँचाइ गर्न गएको थिएँ । पानी लगाएपछि नजिकैको झाडीतिर दिसा गर्न जान लागेको थिएँ । झाडीमा बाघ बसेको रहेछ । एक्कासी मलाई आक्रमण गर्‍यो । जोडले चिच्चाएँ । नजिकैका छिमेकीले होहल्ला गरेर बाघ लखेटेकाले म बाच्न सकेँ ।’१६ चैत २०७७ बिहान ५ बजे घर नजिकैको खेतमा पानी लगाउन गएका बर्दिया गेरूवा नगरपालिका १ जनकनगरका ३५ वर्षीय चुलाराम थारू पाटे बाघको आक्रमणमा परे । थारूको टाउको, कान र ढाडमा गहिरो चोट लागेको छ ।
घाइते थारूलाई आफन्तले एम्बुलेन्समा हालेर तत्कालै नेपालगञ्ज पुर्‍याएका थिए । नेपालगञ्ज मेडिकल कलेजको शिक्षण अस्पताल नेपालगञ्जको आईसीयू वार्डमा उपचाररत थारूले घटना विवरण सुनाउँदै भने- चैत महिना धान रोप्ने सिजन छ । खेतमा सिँचाइ गर्न गएको थिएँ । पानी लगाएपछि नजिकैको झाडीतिर दिसा गर्न जान लागेको थिएँ । झाडीमा बाघ बसेको रहेछ । एक्कासी मलाई आक्रमण गर्‍यो । जोडले चिच्चाएँ । नजिकैका छिमेकीले होहल्ला गरेर बाघ लखेटेकाले म बाच्न सकेँ ।’ अस्पतालका सहायक निर्देशक डा. रोमन किदवाइका भनाइमा पनि थारूको टाउको, कान र ढाडमा चोट लागेको छ । उनी भन्छन्, ‘आईसीयुमा भर्ना गरेर उपचार गरिरहेका छौं । बिरामी होसमै हुनुहुन्छ । अस्पतालको तर्फबाट निको पार्न हरसम्भव कोसिस गरिरहेका छौं ।’ बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज र राष्ट्रिय वन आसपासका सामुदायिक वनमा घास दाउरा लिन, गाईबस्तु चराउन निकुञ्ज र निकुञ्जसँग जोडिएका सामुदायिक वनमा काम विशेषले पुग्ने मानिसहरू पाटेबाघको आक्रमणमा पर्ने गरेका छन् ।
पछिल्लो एक वर्षमा बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको नजिकका बस्तीहरूमा बाघको आक्रमण बढ्दै गएको छ । २०७७ वैशाखदेखि चैत १९ गतेसम्म बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जको विभिन्न क्षेत्रमा बाघको आक्रमणबाट १० जनाको मृत्यु भई सकेको छ भने ८ जना घाइते भएका छन् ।
बाघले आक्रमण गर्ने क्रम बढ्दै गएपछि यो निकुञ्ज क्षेत्रसँग जोडिएको मधुवन, गेरूवा र ठाकुरबाबा गाउँपालिकाका बस्तीमा त्रास बढ्दै गएको छ । विशेष गरेर बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्जसँग जोडिएको खाता करिडोर, गेरूवा नदी किनाराका बस्ती र पूर्व-पश्चिम राजमार्गको भुरीगाउँ कर्णाली क्षेत्रमा पाटे बाघले मान्छेलाई आक्रमण गर्ने गरेको छ ।
पीडितका आफन्तहरूले मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघलाई नियन्त्रणमा लिन सरकारसँग माग गर्दै आएका छन् । बाघको आक्रमणबाट पीडित परिवारका सदस्य अमरबहादुर थारू भन्छन्, ‘पहिला हात्ती गैंडाको डर थियो । पछिल्ला दिनहरूमा पाटे बाघको डर थपियो । साँझ पख घरबाहिर निस्कन, घाँस दाउरा गर्न, गाईबस्तु चराउन जाँदा पनि डराउनु पर्ने अवस्था आयो ।’
उनले भने, ‘सरकारले मान्छेलाई आक्रमण गर्ने बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर चिडियाखाना वा अन्यत्र राख्ने व्यवस्था मिलाउनु पर्‍यो ।’ मान्छेमाथि आक्रमणका घटना बढ्दै गएपछि बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज, राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोष र डिभिजन वन कार्यालय बर्दियाले मान्छेमाथि आक्रमण गर्ने बाघ पहिचान गरेर नियन्त्रणमा लिन सुरू गरेका छन् ।
२०७७ पुसदेखि अहिलेसम्म गेरूवा नदी किनाराको क्षेत्रबाट २ वटा र खाता करिडोर क्षेत्रबाट एउटा गरी ३ वटा पाटे बाघ नियन्त्रणमा लिएर बर्दिया र बाँकेका ‘होल्डिङ सेन्टर’हरूमा राखिएको थियो ।
चैत ५ गते बर्दिया राष्ट्रिय निकुञ्ज क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिएर बाँके राष्ट्रिय निकुञ्जको खैरीस्थित ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखेको बाघ चैत ९ गते भागेको थियो । सेन्टरबाट भागेको त्यो पाटेबाघको आक्रमणबाट हालसम्म ७ जनाको मृत्यु भएको छ ।
यसरी मृत्यु हुनेमा बर्दियाको खाता करिडोर क्षेत्रका ५ जना र सीमावर्ती भारतीय क्षेत्रका २ जना रहेको राष्ट्रिय प्रकृति संरक्षण कोषका बाघ विशेषज्ञ डा. नरेश सुवेदीले बताए । डा. सुवेदीका अनुसार, खाता करिडोर क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको उक्त बाघ करिब ५ वर्षको भाले हो । त्यो बाघ आफ्नी आमासँग हुर्केने क्रममा छुटि्टएर खाता करिडोर क्षेत्रमा बस्दै आएको अनुमान छ ।
सात जना मान्छे मारिसकेको त्यो बाघ ‘होल्डिङ सेन्टर’ बाट भागेपछि बाँके जिल्लाको राप्ती सोनारी गाउँपालिकाको कचनापुर शम्शेरगञ्ज क्षेत्रमा अहिले
त्यसैगरी गेरूवा नदी किनारा क्षेत्रबाट नियन्त्रणमा लिइएको पाटेबाघचाहिँ बुढो र घाइते छ । निकुञ्जभित्रै वयस्क बाघसँगको लडाइँमा घाइते भएर निकुञ्जको ‘कोर’ क्षेत्रबाट लखेटिएको अनुमान गरिएको त्यो बाघ बस्ती नजिकैको सामुदायिक वन क्षेत्रमा बस्दै आएको थियो । बुढो र घाइते भएकाले शिकार खेल्न नसकेपछि त्यो बाघले घरपालुवा जनावर र मान्छेलाई आक्रमण गर्न थालेको डा. सुवेदीको भनाइ छ । उक्त बाघलाई नियन्त्रणमा लिएर अहिले बर्दिया निकुञ्जकै ‘होल्डिङ सेन्टर’ मा राखिएको हो ।
Prevकाठमाडौं उपत्यकाको फोहोर आजदेखि उठ्ने
Nextमाछा मार्न विस्फोटक पदार्थ बनाउँदै गर्दा एकको मृत्‍यु